Taageerayaasha Col. Barre Hiiraale oo Kismaayo ka saaray taageerayaasha Col. Cabdullahi Yuusuf iyo dagaalladdii Xamar ka socday oo weli soconaya. Ruunkinet 23/04/07
Qaar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah oo taageersan Col. Barre Hiiraale ayaa waxaa dagaal culus ku dhex maray magaalada Kismaayo ciidamada ka ammar qaata Col. Afguduud oo ay isku hayb yihiin madaxweyne Cabdudullahi Yuusuf kana talin jiray Kismaayo intii ay ciidamada Itoobiya soo galeen Soomaaliya.
Arrintan ayaa la sheegay in ay ka dambeysay kagadaal markii ay tacadiyo iyo xadgudubyo badan ka geysteen degaanka Kismaayo taageerayaasha Afguduud oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kana billaabeen in ay hubka ka dhigaan beelaha kalane ee ku nool gobolka Jubbada Hoose.
Ciidamada taageersan Barre Hiiraale ayaa iska dhigay tuutihii ay xirnaayeen oo ay ku matalayeen ciidamada dowladda lana wareegeen talada Kismaayo.
Warka ayaa intaasi ku daraya in ciidamad Afguduud ay ka bexeen Kismaayo in kastoo ay warar sheegayaan in ay taageero u doonteen ciidamada Itoobiya si ay u soo galaan magaalada Kismaayo taladana ugu wareejiyaan.
Dhanka kale, dagaallo culus oo gaaray maalintii shanaad ayaa weli ka soconaya qeybo ka tirsan magaalada Muqdisho.
Dagaalkan oo dhex maraya ciidamo taageersan madaxweyne Yuusuf kana tirsan dowladda federaalka ah iyo ciidamada Itoobiya oo la dagaalamaya maleeshiyaad ka soo horjeeda ayaa geystay qasaaro naf iyo maalba leh.
Ciidada Itoobiya ayaa la sheegay in ay doonayaan in ay isku furaan Fagax iyo Istadiyo Muqdisho .
Stadiyo Muqdisho ayaa waxaa ku godoonsan ciimado ma tirsan Itoobiya.